उम्मेद्वार - डा. बाबुराम भट्टराई
डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल गोरखा २
डा.बाबुराम भट्टराई नयाँशक्ति नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ । संविधान घोषणालगतै माओवादी केन्द्र छाडेर सांसदबाट समेत राजीनामा दिएका भट्टराईले २०७३ सालको जेठ ३० गते नयाँशक्ति पार्टीको घोषणा गर्नुभयो । उहाँ २०६८ साल भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । भट्टराईले १९ महिना प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्नुभयो । २०११ असार ४ गते जन्मिएका भट्टराई २०२६ सालको एसएलसीमा बोर्डफस्ट हुनुभएको थियो । उहाँ आइएस्सीमा पनि पहिलो नै हुनुभयो । आर्किटेक्चर भट्टराईले द नेचर अफ अण्डरडेभलपमेन्ट एण्ड रिजनल स्टक्चर अफ नेपाल, ए माक्र्सिस्ट भ्यू विषयमा विद्यावारिधी गर्नुभएको हो । बिसं २०२७ र ०२८ सालतिर अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्दादेखि नै भट्टराईको राजनीतिमा रुची थियो । भट्टराई शुरुमा राजतन्त्र विरोधी मात्रै हुनुहुन्थ्यो । तर वीपी कोइराला राजतन्त्रसँग सहकार्यको नीति लिएर नेपाल फर्केपछि उहाँमा वामपन्थी झुकाव बढ्दै गयो र झापा आन्दोलनबाट प्रभावित भट्टराई नेकपा (माले) प्रति आकर्षित हुनुभयो । तर चीनमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्ने विषयमा नेकपा (माले) प्रति उहाँको असहमति रह्यो । र, भट्टराई चीनको राजनीतिक परिवर्तलाई प्रतिक्रान्ति ठान्ने तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मा लाग्नुभयो । बि.सं २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा बाहेक पञ्चायत विरुद्ध लडिरहेको शक्ति संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा नेकपा (मसाल)को तर्फबाट सक्रिय भएर भट्टराई त्यसको प्रवक्ता बन्नुभयो । चुनावमा भाग लिने र नलिने विषयमा विवाद भएपछि मोहनविक्रम सिंहसँग छुट्टिएका भट्टराईको समूह, नेकपा (मशाल) र सर्वहारावादी श्रमिक संगठन एकीकृत भई नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन भयो । भट्टराईकै नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त जनमोर्चाले बि.सं २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावमा नौ सिट जित्यो र संसदको तेश्रो ठूलो शक्ति बन्यो । बिसं २०५१ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र) बिभाजन भई नेकपा (माओवादी) गठन भएपछि भट्टराई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहँदै आउनुभएको थियो । सशस्त्र बिद्रोहमा संलग्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने योजनाकारका रुपमा भट्टराईलाई नै लिइन्छ । सशस्त्र बिद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुअघि सरकारसँग भएको वार्तामा भट्टराई बिद्रोही पक्षको वार्ता टोलीको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । फरक मत राखेकै आधारमा सशस्त्र बिद्रोहकालमा उहाँलाई पार्टीले कारवाही गरेर नजरबन्दमा समेत राखेको थियो । सशस्त्र बिद्रोहकालमा १० वर्ष भूमिगत रहेका भट्टराई बि.सं २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा देशमै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । भट्टराईले संविधानसभा चुनावमा गोरखा क्षेत्र नम्वर २ बाट ४६ हजार २ सय ७२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले ६ हजार १ सय ४३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दोश्रो संविधानसभा चुनावमा गोरखा क्षेत्र नं १ र रुपन्देही ४ बाट उम्मेदवारी दिएका भट्टराईले गोरखाबाट चुनाव जित्नुभयो । भट्टराई बि.सं.२०६५ भदौ ५ गते गठित संयुक्त सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सोही सरकारमा अर्थमन्त्रीका रुपमा सफल भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रुपमा भने धेरै आलोचित हुनुभयो । काठमाडौंमा सडक बिस्तार भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको एउटा महत्वपूर्ण काम हो । राजनीति बाहेक लेखकका रुपमा समेत स्थापित भट्टराईले दजनौं पुस्तक लेख्नुभएको छ । यसैगरी उहाँले केही पत्रिकामा सम्पादकका रुपमा समेत काम गर्नुभएको थियो । बिप्पा सम्झौता र त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने विचारका कारण भट्टराईलाई भारतपरस्त भनेर आलोचना हुने गर्छ । संविधान घोषणालगतै त्यसको विरोधमा बोलेका कारण पनि उहाँ थप आलोचित बन्नुभयो । अहिलेको चुनाव नजिकै वाम गठबन्धनसँग मिलेका भट्टराई एक हप्तामै गठबन्धन छाडेर बाहिरिनुभयो । र नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो ।